Maitiro ekudzora windows nekubaya kaviri | Ndinobva mac
Maitiro ekudzora windows nekungobaya zvakapetwa kaviri
Vashandisi vanga vari paMac kwenguva yakareba vanoziva dzimwe nzira dzinogona kushandiswa nevashandisi vese uye kuti pakupedzisira kana tangojaira, vanofambisa mabasa ezuva nezuva. Aya matipi, mapfupi ekhibhodi kana zvimwe zvakafanana zvinogona kubatsira zvakanyanya yevashandisi vatsva kuWindows kana kuti zvakapusa vakangotenga Mac yavo yekutanga.
Iyi ndiyo kesi yesarudzo yekudzikisa windows muOS X. Vazhinji vashandisi vane chokwadi kuti watoziva sarudzo yekudzora windows nekudzvanya kaviri pabha yepamusoro windows yakavhurwa muOS X iyo inoshanda kunyange mune kumwe kunyorera, asi vamwe vazhinji vachiri kushandisa iyo 'orenji bhatani' kudzikisira kudoko. Nhasi tichaenda kuratidza maitiro ekushandisa iyi sarudzo yekudzora windows nenzira yakapusa.
Iri ibasa chairo rinobatsira uye rakareruka kumisikidza kana kusaita, maererano nezvinodiwa nemushandisi wega wega. Chinhu chekutanga chatinofanira kuita tinya pane iyo Zvamada System uye kamwe mukati tinopinda Dock. Iye zvino tinogona kumisa iyi sarudzo kudzikisa windows nekudzvanya kaviri pabara remusoro (kurudyi pamusoro payo) uye svetuka kuenda pakudzvanya bhatani reorenji.
Uye zvakare, mune sarudzo dzechiteshi, isu tine mukana wekudzora windows kurudyi kwedoko kana mukati memifananidzo ivo pachavo "Deredza windows mumufananidzo wekushandisa" izvo zvichatiponesa nzvimbo mudoko.
Iyi sarudzo inogona kumisikidzwa kana kuremedzwa paunoda, asi zvinonyanya kubatsira kana tiine akati wandei windows kana maapplication akavhurwa uye isu tinoda kudzikamisa ivo, hongu, mune zvimwe zvinoshandiswa hazvishande uye isu tinofanirwa kushandisa bhatani reorenji kudzikamisa.
Yakazara nzira kuchinyorwa: Ndinobva mac » apuro » Tutorials » Maitiro ekudzora windows nekungobaya zvakapetwa kaviri
Hazvina mhosva kuti ndinofamba zvakadii paInternet, ndinogara ndichiwana mhinduro dzandinotarisa nezveMac pano. Ramba wakadaro… !!!
App nyowani yekutarisa yako MacBook bhatiri mahara kwenguva yakaganhurirwa: Bhatiri Munda
FCPX ine zvakakomba zvikanganiso ne Sony FS7 yakanyorwa zvinhu